छैन गाडी, खानु त पर्याे ! - Everest Dainik - News from Nepal
छैन गाडी, खानु त पर्याे !
जाजरकोटको भगवतीबाट डोल्पाको दुनैतर्फ खाद्यान्न लिएर जाँदै गरेका खच्चडहरु ।
यातायातको पहुँच नभएपछि खच्चड, घोडा र मानिसले बोकेर नै यहाँ खाद्यान्न ढुवानी हुने गर्दछ ।
तस्बिर : हेमन्त केसी, जाजरकोट
याे पनि पढ्नुस जनप्रतिनिधिबीच विवादले प्रशासनिक केन्द्र तोक्न ढिलाइ
ट्याग्स: jajarkot, khadhyanna dhuwani